Hot Sale 1060 H14 Aluminum Circle 1060 H14 Aluminum Sheet Circle From China - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Fivarotana manga 1060 H14 alim-bary aluminium 1060 H14 boribory aluminium avy any China Quick Details
Grade 1000series tezitra O-H112 Type Sheet Circle
Brand Name Jiuzhuo hateviny 0.4mm-6mm savaivony 10-1500mm
surface Treatment Natural Legioma na tsy Non-firaka Place ny Origin Jinan China
fampiharana Light industry; electric profession; famokarana herinaratra famokarana; elektronika; fiara; mpampatsiro hanina; constructions etc
Toe-karena Aoka ho afaka amin'ny alikaola, Dent, fampidirana, scratches, tainkintana, famonoam-panafody, fanotanam-panafahana, korontana, vatom-pandrosoana, loto amam-borona ary fahadisoana hafa izay hanelingelina ny fampiasana
Fampiharana: fiaramanidina, sambo, ary sekoly ara-barotra
Ambony: Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Alloy na tsia: non-alloy
Ohatra: Free sy Fast
Aluminum sheet circle / disc
firaka: indrindra ny 1050.1060.1070.1100. 3003. 5052
Production Line: DC na CC
fampiharana: Electron, trano ilaina, fitsaboana, fiara mandeha amin'ny fiara, fitaovana elektrika, famokarana maodely, spaceflight, thermal insulation, indostria milisy, fanodinana, fanorenana, indostrian'ny pirinty, sns.
Mitandrina tsara: Ny tolotra dia azo ampiasaina araka ny fitakian'ny mpanjifa.
Packaging Details: Fiarovana mahery vaika
Manondrana pallets hazo na araka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Amin'ny ankapobeny, ny alim-bolon'ny alim-bolamena dia mamaritra ny diam-penin'ny 100mm: teboka maromaro maromaro ao anaty kitapo plastika vita amin'ny kitapo plastika / fonosana miloko fotsy / miloko volomparasy. About1.5MT / pallet
Sarin'ny alim-borona misy diamondra eo ambany 100mm: 25kg ao anaty fonosana iray vita tasy. about1Mt / pallet
Delivery Detail: 25 andro aorian'ny fividianana 30% T / T na nahazo ny l \_ C original
• Manana ny saran-dalana mora indrindra sy ny fivoahana haingana isika.
• Manolotra entana miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana sy ny tolotra tsara indrindra isika.
· Manana teknika ara-teknika sy tekinikan'ny famokarana teknika avo lenta izahay.
· Manana laza malaza amin'ny vokatra tsara indrindra isika.
Manana serivisy 24-ora izahay, afaka mifandray amin'ny fotoana rehetra.
1. F: Afaka manome nomerao maimaim-poana ve ianao?
A: Eny, samihafa maimaim-poana no halefa any aminao araka ny zavatra takinao.
A: Amin'ny ankapobeny, MOQ dia 2 MT, saingy ambany noho ny 2 MT dia Ok.
3.Q: Azontsika ekena ve ny manova azy?
A: Eny, afaka manao isika. Afaka mamorona araka ny takian'ny mpanjifa.
4.Q: Olana momba ny kalitao?
A: Araka ny fenitra ho an'ny famokarana dia tsy maintsy mandalo ny vokatra
fanaraha-maso kalitao. Afaka manaiky fanaraha-maso fahatelo izahay.
A: Fanomezan-dàlana haingana ho an'ny habeny, na eo ambanin'ny fifanarahana.
6.Q: Inona ny fe-potoana fandoavanao? A: Isika dia manaiky L / C, T / T.
7.Q: Olana hafa?
A: Azonao atao ny manatona ny mpiasan'ny mpiasan'ny mpanjifa mba hangataka fanampiana.
1060 Aluminum Circle, 5052 Aluminum Circle
Famolavolana aliminioma 3003 1050 1060 H14 H12 1.5mm alim-bary alimina alim-bary